Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 35)
Cilad amni oo khatar ah Sony Xperia Z
Cillad xagga amniga ah ayaa hadda la ogaaday oo u oggolaanaysa marin u helitaanka qalab kasta oo xidhan ee Sony Xperia Z iyada oo aan dhib badani ku jirin.
Afar nooc oo kala duwan oo Samsung Galaxy S4 Mini ah
Samsung waxay soo bandhigi kartaa afar nooc oo kala duwan oo Samsung Galaxy S4 Mini ah, taas oo ku kala duwanaan doonta waxqabadka, laakiin kuma xirna naqshadeynta.
Samsung Galaxy S4, qaar ka mid ah shaqooyinka ugu xiisaha badan
Muuqaalka Hawada iyo Dhawaaqa & Qaylada waa laba shaqo oo cusub oo Samsung Galaxy S4 ah oo aad ka heli doontid wax layaableh fiidiyowyadan ay Samsung toos u samaysay.
Sony Xperia Z waa la cusbooneysiiyay si looga fogaado dhimasho lama filaan ah
Sony waxay soo saartay cusbooneysiin si looga fogaado geerida lama filaanka ah ee ka dhacaysay astaanteeda cusub ee Sony Xperia Z, halkan waxaad ku haysaa xalka
Samsung Galaxy S4 waa taleefanka casriga ee cusub ee nooca Kuuriya. Terminal-ka ahaa kacaan weyn marka laga hadlayo barnaamijyada iyo barnaamijyada.
Samsung Galaxy S4, muuqaalka fiidiyowga ee astaamaha ugu muhiimsan
Saddex fiidiyow oo leh astaamo kala duwan oo ah Samsung Galaxy S4 cusub, oo ay ku jiraan kuwa hakadka caqliga leh ama taabashada taabashada ah.
Samsung Galaxy S4, fiidiyow hordhac rasmi ah
Fiidiyowga rasmiga ah ee soo bandhigista casriga cusub ee Samsung ee la filayo, Samsung Galaxy S4 ayaa dhowr saacadood ka hor lagu soo bandhigay magaalada New York
Maxaa ku cusub kamaradda Samsung Galaxy S4
Kaamirada Samsung Galaxy S4 waxaa ku rakiban waxyaabo cusub sida Riwaayad, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku qaadatid 100 sawir 4 ilbiriqsi gudahood, masax masixi karo waxyaabaha dhaqdhaqaaqa.
Smart Scroll wuxuu raaci doonaa dhaqdhaqaaqa indhahaaga
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee lagu xaqiijiyay dhacdadii Samsung Galaxy S4 waxay noqon doontaa tikniyoolajiyada 'Smart Scroll iyo Smart Pause', tas-hiilaad badan oo loogu talagalay isticmaalaha
S Translator, turjubaan lagu dhisay Samsung Galaxy S4
S Turjumaanku wuxuu ka mid noqon doonaa awooda S4. Toos ugu turjun wada hadal kasta luqado kala duwan.
Horumarinta cusub ee LG Optimus G pro Software
Cusbooneysiin muhiim ah ama Qiime Qiimeyn loogu talagalay LG Optimus G pro oo ku beegan bilowga rasmiga ah ee Samsung Galaxy S4
Batariga Samsung Galaxy S4 wuxuu yeelan doonaa qalab NFC ah
Waxaa la xaqiijiyay in Samsung Galaxy S4 uu yeelan doono qalab NFC ah. Intaa waxaa dheer, tikniyoolajiyaddan waxaa lagu dhex dari doonaa batteriga qalabka, kaasoo noqon doona 2600mAh.
Qalabka Samsung Galaxy S3, gawaarida gawaarida
Waxaan awoodnay inaan isku dayno mid ka mid ah qalabka Samsung Galaxy S3, heysataha gaariga Letendry oo leh dhammeystir iyo shaqooyin naga dhigaya inaan ku raaxeysto.
Xperia Z, gabdho qurux badan oo ku tijaabinaya hoosta qubeyska dareenka
Hordhac ku saabsan qaababka sawirrada waxa noqon doona barta cusub ee Sony ee loogu talagalay kala duwanaanta Xperia Z ee u adkaysta biyaha iyo boodhka.
Samsung Galaxy S4, Raadinta Indhaha si loogu beddelo bogag?
Shaqada cusub ee Samsung Galaxy S4 ayaa hadda si rasmi ah loogu sii daayay, xitaa haddii ay tahay xanta kaliya waxay bilaabaysaa inay xoog yeelato.
MWC 2013, moodellada Samsung ee cusub ee suuqa Yurub
MWC-kii dhawaa ee la soo gabagabeeyay 2013 waxaan ku arki karnaa taxaneyaal Samsung ah meel dhexdhexaad ah oo laga dhisi doono bishan suuqa Yurub.
MWC 2013, tijaabinta Huawei Ascend P2
Laga soo bilaabo Androidsis waxaan tijaabinay Huawei Ascend P2 iyo, in kasta oo aan ka niyad jabnay dhammeystirkeedii balaastigga ahaa, gudaha waxaa ka jira bahal adag oo la rabay
MWC 2013, fiidiyowga midka HTC
Laga soo bilaabo MWC 2013 ee HTC satand waxaan awoodnay inaan ku tijaabinno terminal-kii ugu dambeeyay ee ka socda guriga Taiwanese, kan HTC.
MWC 2013, waxay na tusayaan LG Optimus Vu 2
Tan iyo markii MWC 2013 lagu qabtay magaalada Barcelona waxaan tijaabin karnaa LG Optimus Vu 2 iyo arjiga LG Vu Talk.
MWC 2013, LG Optimus G, bahalka LG
LG waxay guriga ka tuuraysaa daaqada. Shirkadda weyn ee reer Kuuriya ayaa muujisay LG Optimus G, oo ah calanka cusub ee shirkaddu yeelan doonto Spain dhowaan
U isticmaal Android-kaaga sidii kontoroolka fog
Qalabka Remote ee loogu talagalay Android waxaad u rogi kartaa moobilkaaga ama kiniinigaaga meel fog oo ah qalabka elektarooniga ah
HTC One ama Nexus 4 keebaa fiican?
Ugu dambeyntiina, shirkadda Taiwanese ayaa soo saartay HTC One, qiimaheeda waxay si toos ah ula tartami doontaa Google ee Nexus 4, kee baa soo baxa isagoo guuleysanaya?
Soo dejiso oo rakib kumbuyuutarka asalka ah ee Samsung MIUI, ICS iyo Jelly Bean roms
Tutorial si loogu rakibo Kumbuyuutarka Samsung asalka ah MIUI, Ice Cream Sandwich ama Jelly Bean rom.
Bq Aquaris, oo ah udub dhexaad wax soo saar Isbaanish ah
Bq, oo ah shirkad ku takhasustay kiniiniyada iyo buugaagta elektaroonigga ah, ayaa dooneysa inay si weyn ugu booddo suuqa taleefannada gacanta ee loo yaqaan 'Bq Aquaris', oo leh processor laba-geesood ah.
Samsung Galaxy S3, Root iyo Soo Celinta Android 4.1.2
Cashar fudud oo tallaabo-tallaabo ah oo loo rujin karo loona soo celin karo Soo-kabashada Samsung Galaxy S3 oo leh nooca Android 4.1.2
Samsung Galaxy S3, sida loo xaliyo dhibaatada dhimashada lama filaanka ah
Dhimashada degdegga ah ee saameysa Exynos Chip ee Samsung Galaxy S3 ayaa si fudud lagu xallin karaa iyadoo la raacayo tallaabooyinkan fudud.
Motorola Razr waxaan u cusbooneysiiyay Jelly Bean ee UK
Telefoonka caanka ah ee Motorola Razr i taleefan ayaa hela xirmo cusboonaysiin ah oo loogu talagalay nidaamka hawlgalka Android 4.1 Jelly Bean
Fur furaha bootinkaaga Xperia
Tutorial si rasmi ah loo furo bootloader-ka Sony Xperia. Markaad furto bootloader-ka waxaan ku sameyn karnaa waxyaabo aan tiro lahayn bartayada.
Nexus 4, Fur, Xidid iyo Soo kabasho Dummies
Tabobar tallaabo-tallaabo ah si aad si fudud ugu hesho Furitaanka, Xididka iyo Soo-kabashada Google Nexus 4
Samsung Galaxy Xcover 2, oo ah taleefanka casriga ah ee loogu talo galay dadka quudhsada
Telefoonka cusub ee Samsung Galaxy Xcover 2 rooga ah iyo astaamaha uu ku shaqeynayo
Samsung Galaxy S4 ayaa daah furi doonta tiknoolajiyad pixel
Taleefanka cusub ee Samsung Galaxy S4 ayaa soo saari doona tikniyoolajiyad cusub oo maqal iyo muuqaal ah
Sony Xperia Togari, oo leh shaashad 6.44-inch FullHD ah
Sawirka oo maalmo kahor la baahiyay wuxuu lahaan karaa Sony Xperia Togari, bahalka cusub ee Sony ee ay shirkadda Japan doonayso inay ku xoog sheegato suuqa.
HTC waxay diyaarisaa taleefan yar oo ah qalab ahaan
Soosaaraha Taiwanese HTC wuxuu soo saaray qalabyo yar yar si loo xakameeyo taleefanka casriga ah, mashruucu wuxuu ka bilaabmayaa moodooyinka Shiinaha
Ma xasuusataa sida uu mobaylkii ugu horreeyay ee Motorola ahaa?
Martin Cooper wuxuu wicitaankii ugu horreeyay la sameyn lahaa Motorola DynaTAC (taleefanka gacanta ee ugu horreeyay) si toos ah tartame, Joel Engel.
Huawei Ascend Mate, oo leh shaashad 6.1-inji ah
Shirkadda Huawei ayaa soo bandhigtay taleefan casri ah oo wata shaashad dhan 6.1 inji ah oo ay ku dooneyso inay ku gasho suuqa xayeysiinta.
HTC iyo liiska taleefannada gacanta 2013 qalab noocee ah ayaan naqaan?
Liiska waxaa lagu xaday telefoonnada gacanta ee 'HTC' ee loogu talagalay 2013, moodello cusub iyo qaar horeba loo yaqaan oo u muuqda inay bilaabeen sannadkan oo bilaabmaya
Telefoonnadii ugu fiicnaa 2012
Waxaa la soo uruuriyay telefoonada gacanta ee ugu wanaagsan Android sanadkii 2012 iyo astaamahooda muuqda
Samsung Galaxy S3 waxay heleysaa batari dheeri ah bisha Janaayo
Taleefanka sare ee Samsung Galaxy S3 wuxuu helayaa bateri cusub oo dheeri ah
Samsung waxay soo bandhigi kartaa taleefan casri ah oo leh shaashad AMOLED oo dabacsan
Samsung waxay diyaarin kartaa wax aad u buuran CES 2013 ee soo socda. Ragga weyn ee Kuuriya ayaa soo bandhigi kara qalab leh shaashad AMOLED oo dabacsan.
Samsung Galaxy S3 iyo Samsung Galaxy Note 2 tijaabooyin adkaysi
Fiidiyowga soo socda waxaad ku arki kartaa tijaabooyinka kala duwan ee iska caabinta ee labada Samsung Galaxy S3 iyo Samsung Galaxy Note 2 labadaba la hoos geeyay.
Lenovo P770, 29 saacadood oo batari firfircoon
Lenovo P770 waa taleefan casri ah oo lagu iibiyo suuqa Shiinaha qiyaastii $ 270, taas oo ah waxyaabaha ugu waa weyn ee ay leedahay ay tahay nolosha batteriga 3500mAh.
5-inji shaashad HD buuxa oo cusub LG Optimus G2 bisha May 2013
LG Optimus G2 wuxuu soo baxayaa bisha Maajo 2013 processor afar geesle ah oo xawaare sare leh, nidaam cusub oo shaqeynaya iyo shaashad HD oo buuxda.
Samsung ma sii siin doonto baytariyada Apple
Wada shaqeyntii Samsung ayaa la joojiyay markii la joojiyay qandaraaska u oggolaaday inay soo saarto baytariyada kiniinnada iyo aaladaha kale ee Apple.
Samsung SCH-W2013 taleefan qaali ah
Samsung SCH-W2013 waa taleefan casri ah oo la awoodi karo oo keliya oo loogu talagalay dadka nasiibka leh, maaddaama terminal-ka uu ku dhow yahay 3000 euro oo RRP
Nexus 10 Qalabka Qalabka Hadda waxaa laga heli karaa XDA
Qalabka Nexus 10 waa aaladda loo wada dhan yahay ee loogu talagalay kiniinka Google Nexus 10, iyada oo aan ku xididayn karno ama aan ka dhex bixi karin waxyaabo kale oo badan
Motorola RAZR HD iyo RAZR MAXX HD Waxaa Heli Karta Dhawaan Jelly Bean
Motorola waxay diyaarineysaa cusbooneysiinta Android 4.1 Jelly Bean oo ka mid ah taleefannada casriga ah ee waaweyn, moodooyinka RAZR HD iyo RAZR MAXX HD
Nexus 4 Qalabka V1.0 qalab dhan-in-one
Nexus 4 Qalabka V1.0 waa qalab dhan-ka-mid ah oo aan ku rakibi karno darawallada Windows, xididka, Soo-kabashada iyo waxyaabo kaloo badan.
LG F240K waa magaca lagu xantaa inuu yahay moobil heer sare ah
LG F240K wuxuu ka soo muuqday falanqaynta GLBenchmark iyo halka qaraarka shaashadda ugu fiican lagu qiimeeyo.
Motorola Waxay Soo Bandhigeysaa Atrijiraha Cusub ee Atrix HD
Motorola waxay soo bandhigtay nooca cusub ee taleefankeeda, Motorola atrix HD Developer Edition oo u oggolaanaysa soo dejinta ROM-yada gaarka ah si fudud
Dhibaatooyinka isku xirka WhatsApp iyo Movistar
WhatsApp wuxuu ahaa, sida laga soo xigtay Movistar, mas'uul ka ahaa dhicitaankii nidaamka bishii Nofeembar 5, tallaabooyin noocee ah ayay qaadi doontaa shirkaddu si looga hortago guuldarrooyinka cusub?
Samsung Galaxy S3, "Waxaan ahay boqorka adduunka"
Samsung Galaxy S3 ayaa noqotay taleefannada casriga ah ee ugu iibsiga badan adduunka, isaga oo dhaafay Apple ee awoodda weyn leh ee iPhone 4s.
Huawei Ascend D2, Shiinaha ayaa ku sharraxay dhammaadka-dhamaadka
Huawei Ascend D2 waa taleefan casri ah oo Shiinuhu sameeyo oo Huawei uu doonayo inuu si buuxda u galo heerka suuqa ee casriga casriga ah.
Xanta Samsung Galaxy S4 ayaa bilaabmaysa
Astaamaha suurtagalka ah ee Samsung Galaxy S4 iyo sidoo kale taariikhdeeda suurtagalka ah ee soo-saarista ee dib u soo celinta qeybtii hore ee 2013.
Samsung Galaxy Premier, xogta rasmiga ah ee casriga casriga ah ee Android
Samsung Ukraine waxay si rasmi ah u soo bandhigtay taleefanka gacanta ee Samsung Galaxy Premier cusub oo ka socda AndroidSIS waxaan ku siineynaa qeexitaan farsamo oo buuxa
Buugga buuxa ee LG Nexus 4 ayaa loo heli karaa soo dejinta
Nidaamka qalliinka buuxa ee LG Nexus 4 horey ayaa loo soo daadiyey waxaana loo heli karaa soo dejin toos ah. Waraaqaha, codadka iyo codsiyada gaarka ah.
La wadaag xiriiriyaha 3G-ga mobilka shabakadda WiFi
Aaladaha cusub ee Android waxay wadaagi karaan isku xirka xogta 3G waxayna u abuuri karaan shabakad WiFi aaladaha kale inay ku yeeshaan internetka
Huawei wuxuu soo bandhigayaa Y300 si uu ugu dagaallamo heerka dhexe
Huawei wuxuu soo saaray taleefankiisa cusub ee Huawei Y300 kaas oo uu raadin doono inuu xukumo dhexda dhexe dhammaadka 2012
Samsung Galaxy Music, ku raaxayso muusikada mahadsanid kuwa ku hadla teknolojiyadda SRS
Uma baahnid inaad sii wadatid MP3-gaaga mahadnaqa Samsung Galaxy Music, casriga cusub ee Android iyo kuwa ku hadla teknolojiyadda SRS. Ku raaxeyso muusikada.
Samsung Galaxy S, TouchWiz Launcher ee Galaxy S3
Casharro loogu talagalay soo dejinta iyo rakibidda iyada oo loo marayo Soo-celinta Taabashadii hore ee TouchWiz ee Samsung Galaxy S3 ee loogu talagalay Samsung Galaxy S
Kiiboodhka loo yaqaan 'Xperia-style' ee loo yaqaan 'Samsung Galaxy S'
U soo dejiso kumbuyuutarka 'Xperia keyboard' Samsung Galaxy S, oo leh farsamooyin sida garaacista makiinada.
Google Nexus 7, Qalabka V2.0.0 qalab dhan-in-one
Qalabka V2.0.0 ee loogu talagalay Google Nexus 7 waa aalad noo oggolaan doonta inaan wax walba qabanno, laga bilaabo rakibidda Soo-kabashada illaa xididaynta.
Sida loo xidido loona rakibo soo kabashada LG L3 E-400
Tabobar tallaabo tallaabo ah oo fudud oo lagu xidido laguna rakibo soo-kabashada wax ka beddelka ah ama soo kabashada ClockworkMod ee LG L3 E400
Samsung Galaxy Note 2, 20 milyan oo unug ayaa la filayaa in la iibiyo
Samsung waxay rajeyneysaa inay iibiso illaa 20 milyan oo cutub oo ka mid ah phablet-ka cusub ee Samsung Galaxy Note 2, iyadoo laban laabaya nooca ugu horreeya ee Note
Maxaan ku samayn karnaa kaameradda moobiilka?
Habka ugu fiican ee looga faa'iideysan karo kaamiradda moobiilka ee ku jirta Android waa iyadoo la adeegsanayo qaar ka mid ah codsiyada aan kugula talineyno halkan
Samsung Galaxy Nexus, Qalabka loo yaqaan 'Gnex Toolkit v7.8', oo ah hal qalab oo loogu talagalay wax walba
Gnex Toolkit v7.8 waa qalab bilaash ah oo loogu talagalay Windows kaas oo aan ku sameyn karno wax alla wixii aan dooneyno Galaxy Nexus
Motorola waxay diyaarisay taleefan casri ah oo aan xuduud lahayn
Xanta ayaa tilmaameysa taleefan casri ah oo cusub oo Motorola ah oo leh shaashad aan xuduud lahayn
Isbarbar dhigga Samsung Galaxy Note 1 iyo 2
Samsung Galaxy Note ugu horraysay waxay u taagnayd isku darka aaladaha casriga ah iyo kuwa kiniinka ah. Waxay ahayd taleefoon ...
Sony Xperia T, bahalka Sony ayaa ugu dambeyntii la soo saaray
Sony waxay hadda gambaleelka siisay IFA 2012 iyagoo soo bandhigaya Sony Xperia T, oo ah terminal leh qeexitaanno aan caadi ahayn.
Sony Xperia V, taleefanka casriga ah ee shirkadda ay soo saartay ee aan biyuhu la socon oo wata tikniyoolajiyadda NFC One Touch
IFA 2012 ayaa sii wadaysa inay sigaar cabto.Hadda waxaa la joogaa xilligii Sony ee hadda soo bandhigay Sony Xperia V, oo ah taleefan casri ah oo aan biyuhu ka soo tallaabsan karin.
Sony Xperia J, noocyada cusub ee soo gelitaanka ee Sony
Sony Xperia J cusub ayaa lagu soo bandhigi doonaa IFA 2012 wuxuuna balan qaadayaa tayada ugu fiican ee kala duwanaanshaha lagu soo saaray shaabadda Sony
Samsung waxay soo bandhigeysaa Samsung Galaxy S Duos, oo ah taleefan casri ah oo casri ah oo leh laba taageero SIM
Samsung ayaa hadda muujisay sawirradii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy S Duos, oo ah taleefan casri ah oo dhex dhexaad ah oo leh laba taageero SIM.
Sony ma keeni doonto ciyaaro PSX ah taleefannada PlayStation Certified
Ugu dambeyntiina Sony ma keeni doonto PlayStation 1 kulan taleefannada PlayStation Certified
Telefoonada Android dhammaadka sanadka 2012
Telefoonada cusub ee Android dhammaadka sanadka, moodooyinka la filayo ee shirkadaha waaweyn
Samsung Galaxy S, hab kale oo lagu rakibo ClockworkMod Recovery
Hab kale oo lagu rakibo ClockworkMod Recovery Samsung Galaxy S adigoon isticmaalin Odin
Abuuritaanka GoldCard ee qalabka HTC
Cashir fudud oo Fosco de HTCmania ah si loogu abuuro GoldCard qalabka HTC.
Sony waxay iibisay 7.4 milyan oo taleefannada casriga ah rubucii u dambeeyay
Sony waxay ku dhowdahay 8 milyan oo taleefannada casriga ah oo la iibiyay rubucii la soo dhaafay. Jaantus muujinaya caafimaadka wanaagsan ee shirkadda.
RecoverX, si fudud ugu rakib dib u soo kabashada boosteejooyinka Xperia
Tutorial si loo rakibo soo kabashada wax laga badalay ee tiro wanaagsan oo terminal ah oo ka mid ah Sony Ericsson Xperia kala duwan oo leh RecoverX
Ku xidid terminal-kaaga Z4root
Z4root waa codsi loogu talagalay Android kaas oo naga caawin doona inaan xididno terminal badan. Waxaad ka soo dejisan kartaa halkan saxda ah bilaash.
Sida loo abuuro qalabka loo yaqaan 'Autoflasheable firmware' ee Heimdall
Cashar fudud oo loogu talagalay dadka isticmaala Heimdall si ay u abuuraan shirkado u gaar ah otomaatiga-flash-ka.
Shuruudaha si aad u iftiimiso rom a karsan Samsung terminals
Talooyin ku saabsan sida loo sii wado marka la rakibayo roman karsan teleefannada Samsung
Jelly Bean ayaa loogu dhawaaqay HTC One Phones
HTC waxay xaqiijisay inay diyaarinayaan inay ku sii daayaan Android 4.1 Jelly Bean taleefannada kala duwan ee taxanaha HTC One.
Sida saxda ah ee loo jaangooyo Gps-ka kumbuyuutarrada Samsung
Fudud-fiidiyow fudud oo loogu talagalay in lagu habeeyo oo loo hagaajiyo GPS-ka Samsung-ga kumbuyuutarrada leh nidaamka hawlgalka Android.
Kooxda Android Jelly Bean Samsung Galaxy S
Laga soo bilaabo kooxda 'Android Jelly Bean team', waxaan ka heleynaa rom-ka ugu fiican xilligan Samsung Galaxy S, oo ah mid shaqeynaya oo dhaqso badan.
Kooxda Elite Jelly Bean Rom ee Samsung Galaxy S
Beta 3 ee jelly Bean rom loogu talagalay Samsung Galaxy S oo ay abuureen kooxda karinta Elite.
Sida loo rakibo Heimdall Linux
Sida loo rakibo Heimdall si loogu dhajiyo qalabka Samsung Galaxy qoysaska ka shaqeeya nidaamka Linux
Jacaylka ugu horreeya ee Jelly Bean ee DerTeufel1980 loogu talagalay Samsung Galaxy S (GT-I9000)
Cashar fudud oo lagu ogaanayo Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S ilaa Android 4.1 Jelly Bean adoo adeegsanaya rom oo ay karisay DerTeufel1980
Sida loo rakibo ClockWorkMod Recovery ee LG Optimus 3D
Cashar fudud oo ay ku jiraan dhammaan aaladaha, sida loo rakibo ClockWorkMod Recovery ee LG Optimus 3D.
Sida loo xidido LG Optimus 3D
Tababar wax ku ool ah oo ku saabsan sida loo rujiyo LG Optimus 3D qaab fudud iyadoo la adeegsanayo Windows PC-ga iyo aaladda Megatron.
Tilmaamaha Isticmaalaha ee HTCdev
Tilmaame wax ku ool ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo websaydhka HTCdev, kaas oo aad ku furan karto bootloader-ka tiro badan oo ka mid ah terminaalka HTC
Sony Xperia waxay heshay 5 abaalmarinno dhibco casaan ah
Khadadka Sony Xperia ee taleefannada gacanta iyo qalabku wuxuu ku guuleystaa 5 abaalmarin abaalmarinta dhibcaha casaanka ee 2012
Sida loo rakibo Soo Celinta Samsung Galaxy Tab p1000n
Sida loo rakibo ClockworkMod Recovery ee Samsung Galaxy Tab p1000n
Sida loogu ordo Heimdall Windows-ka
Cashar ku saabsan sida loo rakibo Heimdall Windows-ka. Heimdall waa barnaamij kale oo odin ah oo naga caawin doona inaan iftiimino GT-i9000
Sida loo iftiimiyo Samsung Galaxy tab 7 ″ oo leh habka loo yaqaan 'Overcome method'
Sida loo iftiimiyo Samsung Galaxy tab 7 "ama p-1000 illaa Android 2.3.3, xidid oo rakib soo-kabashada la beddelay.
Samsung Galaxy S 3, sida loo xidido loona rakibo ClockworkMod Recovery hal talaabo
Cashar fudud oo lagu rakibo ClockworkMod Recovery Samsung Galaxy S 3 adoo adeegsanaya odin 3.04
Samsung Galaxy S, Rom Gnex Stock 1.4.1 Android 4.04 ee Elite
Pure Stock Gnex 1.4.1 waa noocii ugu dambeeyay ee Elite rom ee Samsung Galaxy S ama GT-i9000.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab 7 ″ (p-1000) ilaa Android 4.0
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab ilaa Android 4.0.4 adoo dhalaalaya CyanogenMod 9 Nigthly Builds rom.
Rom ICS F4k MOD v4.0.4 r4 IMM76I oo leh Linaro oo loogu talagalay Samsung Galaxy S
F4K waxay noo soo bandhigaysaa rom-kii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy S oo leh hagaajinta lambarka Linaro.
Smart Watch: saacadda smart ee Sony
Sony Smart Watch wuxuu ku sii socdaa iibinta websaydhka rasmiga ah ee isku midka ah kaliya 129 euro, oo leh nidaamka hawlgalka Android iyo wax ka badan.
Sida loo iftiimiyo taxanaha yar yar ee Samsung Galaxy oo leh odin badan soo-dejiye
Video-tutorial ku saabsan sida loo iftiimiyo taxanaha yar yar ee Samsung Galaxy ee casriga ah oo leh odin badan soo dejiye.
Qeybta Samsung Galaxy Tab waxay heli doontaa Android 4.0 toddobaadyada soo socda
Samsung waxay xaqiijisay in laga bilaabo Julaay ay bilaabi doonaan Android 4.0 Ice Cream Sandwich oo loogu talagalay alaabooyinka kala duwan ee taxanaha Galaxy Tab.
Qiss ii roms cusub iyo kacaan
Qiss me waa romans kacaan oo asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha oo loo heli karo aaladaha kala duwan ee Android, oo ay ku jiraan Galaxy S
Sida loo dhajiyo Samsung terminals-ka nidaamka hawlgalka Android
Sammobile waa bog u heellan dhammaan aaladaha Samsung, kaas oo aan ka helno dhammaan qalabka biligleynaya ee la heli karo.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S ilaa CM9 habeen kasta
Nidaam sax ah si loogu cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S nooc cusub oo ah CM9 habeen kasta.
MOD TouchWiz 4 Launcher v2 - GB, CM7, ICS ee Samsung Galaxy S
Taabashada TouchWiz Launcher 4 V2 ee Samsung Galaxy S, xirmo leh Launcher-ka wax laga beddelay oo lagu rakibin karo soo kabashada.
Sony Xperia tipo, casriga cusub ee Sony ee leh Dual SIM
Sony ayaa soo bandhigtay Sony Xperia tipo, oo ah taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah oo u taagan taageeradiisa Dual SIM.
Milyan Daqiiqado, beddelka Sony ee sawiradaada
Milyan Daqiiqado waa codsi Sony ah oo dardar geliya howlaha abaabulka sawirrada si aad had iyo jeer u haysatid sawirkaaga aan fiicnayn.
HTC Desire, ku rakib Android 4.03 leh Fallout rom
Ku raaxayso nooca ugu dambeeya ee Android ee ku saabsan HTC Desire, oo ah hab aad uga faa'iideysan karto kartida ugu badan ee taleefannada casriga ah ee reer Taiwan
Sida loo xidido Samsung Galaxy S2
Tababar wax ku ool ah oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u rujiso Samsung Galaxy S2, ama sidoo kale loo yaqaan GT-i9100.
Remics-UX rom-ka ugu fiican Samsung Galaxy S
Remics-UX waa roomaanta ugu fiican xilligan Samsung Galaxy S, oo ku saleysan CM9 habeen walba iyo noocyo badan oo Samsung Galaxy SIII ah.
Samsung waxay ku soo bandhigtay Music Hub gudaha Spain, kaliya Galaxy S III
Iyadoo la adeegsanayo Music Hub shirkadda Kuuriya ee Samsung ayaa isku dayi doonta inay la tartanto iTunes iyo Spotify qaybta muusikada iyada oo loo marayo qulqulka.
Sida loo xidido Samsung Galaxy S3
Tababar wax ku ool ah oo leh sawirro ku saabsan sida loo rujiyo Samsung Galaxy S3, qaab fudud oo fudud.
Samsung Galaxy S, sida loo xaliyo dhibaatooyin badan oo xiritaan qasab ah
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka meelaha iyo qasabka lagu xiro ICS roms ee Samsung Galaxy S. Tani badanaa waa dhibaatada qaybinta datadata
Sida loo rakibo ClockworkMod Recovery ee Samsung Galaxy R i9103
Tabobar tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo rakibo soo-kabashada Samsung Galaxy R ama sidoo kale loo yaqaan GT-i9103
Soo degso rom Samsung Galaxy S Doc's Master ICS V12
Soo qaado Romanka 'Doc's Master ICS V12 rom' iyo casharkeeda rakibaadda tallaabo-tallaabo ee loogu talagalay Samsung Galaxy S.
Samsung Galaxy S3 qalab buuxa ayaa la heli karaa
Farsamooyinka buuxa ee Samsung Galaxy S3 waa la heli karaa, kaas oo horumariyayaashu ay ugu gudbin doonaan barnaamijyadooda mobilada kale
Sida loo furo Samsung Galaxy mini gabi ahaanba bilaash
Tabobar fudud oo lagu furo Samsung Galaxy mini bilaash ah, iyadoo lagu helayo nidaamka siddeed lambar lambar furitaan ah
Sida loo furo bootloader-ka tiro wanaagsan oo ah terminaalka HTC oo la socda HTCdev
HTCdev waa bog deg deg ah ka dib diiwaangelinta ka dib, waxaan kala soo bixi karnaa qalabka lagama maarmaanka u ah furitaanka bootloader-ka.
New HTC Ville C, nooca dhaqaalaha ee One S
Qeexitaannada HTC Ville C, oo ah nooc ka jaban HTC One S, oo leh shaashad 4.3 iyo khafiif ah, ayaa la soo daadiyey.
Samsung Galaxy S, sida loo beddelo modem-ka ku-tiirsanaanta ICS-ka
Cashar fudud oo lagu beddelayo modemka Samsung Galaxy S, ama sidoo kale loo yaqaan GT-I9000, oo ay ku jiraan dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah ficilka.
Sida loo xidido loona rakibo ClokworkMod Recovery ee Huawei u8650
Sida loo xidido loona rakibo ClockworkMod Recovery ee Huawei u8650, cashar talaabo-tallaabo ah oo sawirro wata.
Kooxda Danab ee Rom: Huawei U8650
Rom loogu talagalay Huawei u8650 oo ku saleysan Android 2.3.5, rom oo ku siinaya xawaare aad u sarreeya iyo khibrad taabasho.
Huawei u8110, sida loo xidido loona rakibo ClockworkMod Recovery
Tababar wax ku ool ah oo lagu rakibo ClockworkMod Recovery iyo xidid Huawei u8110, oo ay ku jiraan dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah.
Soonr Scribble oo loogu talagalay Galaxy Note: ku sax dukumintiyadaada daruuraha
Kaydi oo la wadaag dukumiintiyadaada daruurta Soonr oo wax ka beddel iyaga oo uga mahadcelinaya Galaxy Note oo leh 'Shortr Scribble'.
Samsung Galaxy S, sida loo xaliyo arrimaha barnaamijka Viber ee ku saabsan roms-ka ICS
Casharro wax ku ool ah oo loogu talagalay isticmaalayaasha roms-ka ICS ee Samsung Galaxy S. Adoo tifaftiraya faylka build.prop, waxaan heli doonnaa Viber inuu si fiican u shaqeeyo.
Sida loo furo Samsung Galaxy S iyo Samsung Galaxy SII oo leh Galaxy S Unlock
Tabobar tallaabo-tallaabo ah si loo furo noocyada taleefannada kala duwan ee qoyska Samsung Galaxy S, adoo adeegsanaya Galaxy S Unlock, App bilaash ah oo ka socda Play Store.
Cusbooneysiinta romerka cusub ee Dark Knight ICS Android 4.0.4 ee loogu talagalay Samsung Galaxy S.
Samsung Galaxy S, XXJW4 cusbooneysiinta qiimaha xirmada ayaa loo heli karaa Odin
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S ilaa android 2.3.6 XXJW4 adoo adeegsanaya Odin daaqadaha. XXJW4 waa cusbooneysiin weyn oo leh horumarin badan
Samsung Galaxy S, sida loogu rakibo Rom qaab nadiif ah
Samsung Galaxy S, nidaamka loo raaco si loo sameeyo rakibo nadiif ah oo Rom ah, oo ah talaabo talaabo talaabo ah oo sawirro leh.
Samsung Galaxy S3: bahalka dabagalaya afar
Filasho ku saabsan daahfurka Samsung Galaxy S3 munaasabadda Unpacked, oo leh processorkeeda cusub ee Exynos 4 Quad.
Sida loo cusbooneysiiyo rasmiga ah ee Samsung Galaxy S ilaa Android 4.0.3 adoo adeegsanaya Elite Rom, gaar ahaan 9.1.
Samsung Galaxy S, ku cusbooneysii adoo adeegsanaya odin ilaa firmware 2.3.6 iyo xididkeeda CF
Cashar fudud ayaa lagu sharaxay talaabo talaabo talaabo ah iyo sawiro si aan rasmi aheyn loogu cusbooneysiinayo Samsung Galaxy S ilaa Android 2.3.6 JVU.
HTC waxay ku dari doontaa LogMeIn Samatabbixinta dhammaan qalabkeeda Android
HTC waxay ku dari kartaa LogMein dhammaan aaladaha ay wadato ee Android, war-saxaafadeedka HTC waxay rabtaa inay meel fog ka baaraandegto dhibaatooyinka ku saabsan arjiga la yiri.
Samsung waxay daabacdaa liiska cusbooneysiinta
In kasta oo ay bilo ka soo wareegtay markii Ice Cream Sandwich ay soo saartay Google. Kaliya 1% qalabka Android ayaa ku raaxeysta nuqulkan. Dambiga ugu weyn ee dib udhacaani waa soosaarayaasha, kuwaas oo, laqabsashada iyo habeynta nooca ugu dambeeya ee Android ee Smartphone-ka iyo Kiniiniyada, dib udhaca taariikhda cusbooneysiinta qalabkooda, iyagoo ku xisaabtamaya Smartphone-kaaga ama Tablet-ka inay awoodaan inay cusbooneysiiyaan. Samsung waxay si rasmi ah u sameysay liiska qalabka awood u yeelan doona inay ka cusbooneysiiyaan Gingerbread ilaa Ice cream Sandwich bishan.
LG wuxuu soo bandhigayaa xal cusub oo loogu talagalay in lagu buuxiyo wireless ka taleefannada casriga ah
LG waxay toddobaadkan oo dhan ku soo bandhigtay MWC 2012 saldhig lacag-bixin la'aan ah, moodel cusub oo loo baabtiisay CMR-800
Isticmaal batari xad dhaaf ah? Sharax iyo xal.
Maqaalka maanta waxaan ku siinayaa sharaxaad ku saabsan mid ka mid ah sababaha suurtagalka ah (kuwa ugu badan) iyo xallinta dhibaatada isticmaalka bateriga degdegga ah. Si loo soo koobo, dambiilaha ugu weyn ee qarka u saaran batteriga isla markiiba waa qaladka processor-ka.
QualComm wuxuu baraa xirfadaha processor-keeda cusub ee Snapdragon S4
Shirkadda Qualcomm ayaa soo saareysa processor-ka S4 ee casriga ah ama aaladaha mobilada, iyada oo awood u leh inay si weyn u hagaajiso kaameradda
Sawir cusub ayaa soo ifbaxaya, iyadoo loo maleynayo inay tahay taleefankii ugu dambeeyay ee Samsung ah ee uu ku soo bandhigi doono Shirka xiga ee World Mobile
Wararka cayaaraha (I). Ku ciyaar PSP-ka Android?
Sony waxay ogaatay kororkaan warshadaha ciyaarta fiidiyowga. Waxay horeyba u sameysay sii deynta Xperia Play, iyadoo soo bandhigeysa fikradda ah "console-phone" haddana waxay mar kale sameysaa. Tan iyo markii, Sony waxay sii deyn doontaa noocyada fiidiyowga fiidiyowga ee PSP dhammaan noocyada qalabka Android.
Batariga waara oo sii jira ...
Mudo intee le'eg ayuu batteriga casrigaaga socdaa? 12 saacadood ... 1 maalin dirqi ah? Mid ka mid ah faa'iido darrooyinka haysashada taleefannada casriga ah ee awoodda badan leh adeegsiga iyo adeegyadu waa isticmaalka badan ee batteriga. Taasi waa sababta dukaamada khadka tooska ah aan uga heli karno tiro badan oo baytariyaal kale ah oo loogu talagalay Smartphone-ka Android. Maanta waxaan u imid inaan ka hadlo batteriga leh awoodda ugu sareysa ee aan helay.
Xusuusta taleefanka ma buuxsan tahay? Xagee ku baxeen dhammaan MB / GB qalabkaygii?
Waa maxay sababta, haddii Taleefankeyga casriga ah ama Tabletkeygu leeyahay X MB / GB xasuusta, kaliya waxaan haystaa qeyb yar oo kamid ah si aan ugu rakibo barnaamijyada? Maxay xusuustaydu si dhakhso leh u buuxisaa haddii qalabkeyga Android uu leeyahay X GB? Maanta waxaan sharaxayaa sababta keentay dhacdadan waxayna leedahay magac: QAYBAHA.
Sony Ericsson Xperia Ray (I) Dib u eegis
Waad ku mahadsan tahay wiilasha ka socda Sony Ericsson waxaan awoodnay inaan haysano Xperia Ray muddo dhowr toddobaad ah, intii lagu jiray ...
HTC waxay furaysaa Wildfire, Wildfire S, iyo Desire bootloader.
HTC waxay mar kale cusbooneysiineysaa liiska mobilada la jaan qaadaya furitaanka bootloader-ka caanka ah, hadda HTC Wildfire, Wildfire S iyo Desire ayaa ku raaxeysan kara helitaanka xididka.
Samsung ma cusbooneysiin doonto Galaxy S iyada oo leh qiime kasta oo qiimo leh
Samsung warbixinteeda saddexaad waxay go'aansatay inaysan ku dhejin wax xirmo qiimo ah Samsung Galaxy S ama kiniinkeeda Galaxy Tab, sida ku xusan bayaankeeda rasmiga ah sababo la xiriira cilladaha qalabka
Samsung waxay rajeyneysaa mustaqbal leh qaabab jilicsan
Samsung waxay na tusaysaa fiidiyoow fikrad ah oo laga filayo teknolojiyadda kiniinka sanadaha soo socda iyo sida loo isticmaali karo.
Samsung Galaxy Tab 10.1 Dib u eegis (Qaybta Labaad)
Dib u eegista barnaamijka lagu soo daray Samsung Galaxy Tab 10.1.
Samsung Galaxy SII vs IPhone 4S, tijaabada adkeysiga
Tijaabada iska caabinta naxdinta leh ee udhaxeysa SGSSII iyo IPhone 4S
Adiga kula jira, ciyaaro badan oo loogu talagalay Xperia Play… iyo bilaash
In kasta oo aaladda Sony Ericsson Xperia Play ee taleefanka casriga / fiidiyowga ciyaarta si weyn loo cambaareeyay ka dib markii la bilaabay, runtu waxay tahay
Miisaska Android ee shirkadda Sony ayaa haddaba lagu iibinayaa Spain
Miisaska Android ee shirkadda Sony ayaa haddaba lagu iibinayaa Spain.
Samsung Premium Apps Store: Dukaan cusub oo codsi ah oo loogu talagalay Android.
Sprint wuxuu cusbooneysiiyaa Gingerbread qaabkiisa gaarka ah ee LG Optimus One the Optimus S
Samsung Galaxy S2, casriga casriga ah qalabka casriga.
Sony Walkman Z, ciyaariyahan warbaahin badan oo wata Android 2.3 Gingerbread
Sony Walkman Z, ciyaariyahan warbaahin badan oo wata Android 2.3 Gingerbread.
Sony Ericsson Xperia Play 4G, laga soo bilaabo gacanta AT&T
Sony Ericsson Xperia Play 4G, waxaa qortay AT&T.
Android 2.3.6 Gingerbread-ka Nexus S iyo dareenka ugu horreeya ee isticmaalayaasha
Android 2.3.6 Gingerbread-ka Nexus S iyo dareenka ugu horreeya ee isticmaalayaasha.
Waxaan tijaabinay LG Optimus 3D (III)
Imtixaanka LG Optimus 3D
Waxaan tijaabinay LG Optimus 3D (II)
Hada waad furi kartaa HTC Sensation
HTC waxay leedahay faahfaahin aad u xiiso badan oo la socota isticmaaleyaasheeda iyada oo la fududeynayo furitaanka bootloader-ka dhammaan qalabkooda….
Samsung SGH-i927: Galaxy 2 oo leh kumbuyuutar QWERTY jireed ah
Samsung SGH-i927: A Galaxy 2 oo leh kumbuyuutar QWERTY ah.
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (III) tijaabo
Qaybta saddexaad ee Dib-u-eegista Galaxy S Player oo leh Android 2.2
Tijaabinta HTC ChaChaCha (III)
Qeybta seddexaad iyo tan ugu dambeysa ee dib u eegista xarunta HTC. Kadib qeybtii ugu horeysay ee aan ku qiimeynay qalabka iyo ...
Motorola Atrix waa la cusbooneysiiyay Android 2.3.4 Gingerbread
Tijaabinta HTC ChaChaCha (II)
Qaybta labaad ee dib u eegista HTC ChaChaCha
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (II) tijaabo
Qaybta labaad ee dib u eegista Galaxy S Player Wifi 5.0
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 tijaabada (I)
Dib u eegista LG Optimus Black (II)
Kadib qaybtii ugu horreysay ee aan uga hadlayno qaybta jireed ee xarunta, qalabka iyo qaybaha, tan ...
HTC Dareenka Vs LG Optimus 2x
Isbarbardhiga LG Optimus 2x iyo HTC Sensation
Sony Ericsson Xperia Active, taleefan casri ah oo aan biyuhu la socon karin oo wata Android 2.3 Gingerbread
Sony Ericsson Xperia Active, oo ah taleefan casri ah oo aan biyuhu la socon karin oo wata Android 2.3 Gingerbread.
Imtixaanka HTC Sensation (III)
Qaybta saddexaad ee dib u eegista HTC Sensation
Sony Ericsson TXT Pro, casriga ah ee loogu talagalay dadka jecel shabakadaha bulshada
Sony Ericsson TXT Pro, casriga ah ee loogu talagalay dadka jecel shabakadaha bulshada.
2 Tijaabada 2 LG Optimus 2x (III)
Qaybta saddexaad ee dib u eegista LG Optimus 2x
Waxaan tijaabinay HTC Wildfire S (III)
Qaybta saddexaad ee tijaabada HTC Wildfire S
Ciyaaraha qaaska ah ee loo fasaxay Sony Ericsson Xperia Play
Waxay sii daayaan ciyaaro gaar ah oo loogu talagalay Sony Ericsson Xperia Play.
LG Optimus Pad wuxuu yimid Spain gaar ahaan Vodafone.
LG Optimus Pad wuxuu yimid Spain gaar ahaan Vodafone. Kaabista shaqsiyaadka, kuwa madaxbanaan iyo shirkadaha.
Sharp Aquos Telefoon SH-12C, casriga cusub ee 3D ee japan
Sharp Aquos Telefoon SH-12C, casriga cusub ee 3D ee japan.
Gawaarida Motorola Droid X2 ayaa xaday
Sooc Motorola Droid X2
Soo bandhigida Xperia Mini iyo Xperia Mini-Pro cusub
Soo bandhigida Sony-Ericsson ee moodooyinka cusub ee Xperia Mini iyo Xperia Mini Pro
Samsung Droid Charge, astaamaha casriga cusub
Samsung Droid Charge, astaamaha casriga cusub.
Tijaabinta HTC Desire S (II)
Qaybta labaad ee dib u eegista HTC Desire S
7-da Smartphone-ka ah ee ugu fudud ee la jabsado, Sida ku cad Magazine Magazine
Gadget Lab, oo ka socota shabakadda majaladda Wired, ayaa suuqa ka xushay toddobada taleefannada gacanta ee ugu “jilicsan” Android.
Tijaabinta HTC Desire S (I)
Thanks to HTC waxaan fursad u helnay inaan tijaabino nooca HTC ee dhawaan la soo saaray, HTC ...
Dib u eegida HTC Incredible S. Waxaan tijaabinay markii hore.
Imtixaanka terminaalka 'HTC Incredible S'.
Cusbooneysiin cusub oo Samsung ah, oo wata kumbuyuutarka Qwerty. A 'cagaaran' Android.
Cusbooneysiin cusub oo Samsung ah, oo wata kumbuyuutarka Qwerty. A 'cagaaran' Android. Waxaa suuq geeyay shirkadda duulimaadka Mareykanka ee loo yaqaan 'Sprint' illaa 8-da Maajo
Xidid Samsung Galaxy S (GT-i9000), oo leh 2.3.3 Sanjabiil
Casharbarka si loo helo marin xidid leh ee xaday Android 2.3.3 Gingerbread ROM ee Samsung Galaxy S GT-i9000. Summad XXJVK, oo leh Odin. Iniin aasaasi ah
Xogta Rasmiga ah ee Gingerbread 2.3.3 Cusbooneysiisay Samsung Galaxy S
Rasmiga rasmiga ah ee loo yaqaan 'Gingerbread' 2.3.3 ROM ee loogu talagalay Samsung Galaxy S ayaa la daadiyey. Dhis code XXJVK. Tilmaamaha rakibida.
Xididka HTC Thunderbolt 1 guji
Sony Ericsson Xperia X10 waa la cusbooneysiiyay Android 2.3 Gingerbread
Sony Ericsson waxay ku dhawaaqday inay sii deyn doonto cusbooneysiinta nidaamka hawlgalka moobiilka ee Xperia X10 casriga ah ee Android 2.3 Gingerbread.
Ubuntu oo ku socota Motorola Atrix
Dakada Ubuntu ee Motorola Atrix
LG Optimus One ayaa loo cusbooneysiiyey Android 2.3 Gingerbread
LG wuxuu ku dhawaaqay in bisha May ee soo socota LG Optimus One smartphone uu heli doono cusbooneysiinta nidaamka hawlgalka mobilada ee Android 2.3 Gingerbread
Asphalt 5 HD iyo NOVA HD Bilaash ah barnaamijyada Samsung
Asphalt 5 bilaash ah iyo NOVA oo ka tirsan Samsung App
Shalay waxaan ku tusnay sawirada Samsung Galaxy Pro waxaanan ku tusnay sawiradeedii ugu horeeyay. Laakiin tani maahan kan keliya ...
Tattoo HTC. Midki la iloobay.
Taariikhda HTC iyo Tattoo-ga iyo sida cusbooneysiinta loogu sameeyo Android 2.1 ama wax Android ah weligood ma imaan
Gameloft wuxuu ku dhawaaqay 10 ciyaarood oo loogu talagalay Xperia Play
Ciyaaraha 1-aad ee Gameloft waxaa loo heli doonaa Xperia Play maalinta la sii daayo
Motorola waxay soo bandhigeysaa Motorola PRO
Motorola ayaa lagu soo bandhigay shalay Febraayo 14 carwadii Barcelona MWC iyada oo moodalkeeda leh kumbuyuutar jidh ahaaneed Motorola PRO loogu talagalay ...
Sony-Ericsson ee MWC
Warka Sony-Ericsson ee Shirka Mobaylka Adduunka ee Barcelona 2011
Ku fur barnaamijkaaga 'HTC Desire' bilaash!
Ka xoreyso HTC Desire kombiyuutarkaaga iyo USB-gaaga
Qaado kiiboodhkaaga cusub ee Galaxy Tab Bilaash ah
Xayeysiinta Samung siinta Keyboard Keyboard.
Samsung Galaxy Ace iyo Samsung Galaxy Mini, oo ah laba casriga casriga casriga ah ee dalka Spain
Samsung Spain ayaa ku dhawaaqday imaanshaha laba taleefan oo cusub oo Android ah, Galaxy Ace iyo Galaxy Mini
Motorola i886, laba teebabka iyo iDEN tiknoolajiyad ku jirta android gaar ah
Telefoonkii gacanta ee ugu horreeyay ee Android oo leh laba teebabka jirka, Motorola i886 ayaa loogu talagalay inuu adeegsado shabakadda US Spint-Nextel IDEN.
Waxaan mar kale aragnaa Aigo A8, 14 megapixel kamarad leh taleefanka Android hadiyad ahaan
In kasta oo Aigo (Altek Leo) uu soo bandhigo A8-keeda oo ah kamarad dijitaal ah oo leh taleefan isku dhafan, runtu waxay tahay in, lagu qiimeeyo sawirrada, waxay ku dhowdahay inay noqoto taleefan kamarad dijitaal ah
Samsung 4G LTE, oo ah taleefan kale oo casri ah oo Android ka socda Verizon
Waxaan horey kuugu sheegnay Motorola Droid Bionic, oo ah taleefan casri ah oo bixiya isku xirnaanta shabakadda 4G LTE ee ...
Dhoola Cadeynaya, Android oo wata kumbuyuutar jireed oo loogu talagalay Thailand
Huawei waxay isku dayday inay naga yaabiso (wiilkuna wuu ku guuleystay) casriga casriga ah ee Android, Spriiing Smile
Htc Thunderbolt ayaa la soo bandhigay, Desire HD oo leh kamarad hore
Htc Thunderbolt ayaa ugu dambeyntii la soo bandhigay inkasta oo ay ku jirto sheeko farsamo oo aan hore u aqoon. asal ahaan waa Desire HD oo leh kamarad hore.
Motorola Atrix 4G, dual core, 1Gb Ram iyo 4-inch QHD shaashad. Wax intaa ka badan oo la yiraahdo
Motorola Atrix 4G maahan uun taleefan casri ah, waa taleefan casri ah oo casri ah oo ka kooban laba-geesood, 4-inch QHD shaashad iyo 1Gb oo RAM ah
Sony Ericsson Xperia Arc waa magaca ugu dambeeya ee dhaxalsugaha Xperia X10 horeyna wuxuu u leeyahay fiidiyow
Sony Ericsson Xperia Arc ayaa noqon doonta magaca uu qaatay bedelka kan hadda jira ee Xperia X10
Kies Air kuu ogolaanayaa inaad si aad u waafajin aad Samsung Galaxy la your computer wireless
Codsiga 'Kies Air' waxaad kula jaanqaadi kartaa Samsung Galaxy S kombuyutarkaaga adoo adeegsanaya Wi-Fi
Htc Evo Shift 4G, Android cusub oo wata kumbuyuutarka jirka ayaa lasoo bandhigay
Sprint waxay soo bandhigtay terminal-keeda cusub ee Android 4G, Htc Evo Shift, kaas oo ku daraya kumbuyuutar jireed qwerty jirka ah.
5-ta ugu sarreysa taleefannada ugu fiican ee Android ee 2010
Liistada waxa noqon kara 5 taleefoon ee ugu fiican sanadka 2010 sida ay qortay warbaahinta khaaska ah
Samsung W899, wax yar oo u gaar ah Android ee Shiinaha
Samsung W899 waa terminaal duugoobay oo leh dabool dusha sare leh laakiin leh gaar ahaaneed inuu leeyahay laba shaashad qoloftiisa sare.